converter များစုဝေးရာ(1) - Page3- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပြန်စာ - Mp4 To Avi Converter
ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ရတယ်ဗျ ၊ အဲဒါမျိုး ကျနော်လည်း ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ တကယ်လို့ဒေါင်းလို့မရရင် အဲဒီ page မှာ refresh တစ်ချက်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
File Host တွေကို IDM သုံးရင် IDM က တစ်ခါတစ်ခါ file size မှာဘာမှ မပေါ်တဲ့ပြဿနာ ရှိတတ်တယ် ။
ဒါဆို အဲဒီ Page ကို IDM မှာ file size ပြန်မြင်ရတဲ့အထိ refresh ပြန်လုပ်ပေးခြင်းအား ဖြင့် အဆင်ပြေသွားပါတယ် ။
တစ်ချို့ ISP တွေ ကျပြန်တော့ ADrive ကိုလုံးဝကို ၀င်လို့မရတာ ၊ ဒါက ကိုယ် service ယူထားတဲ့ ISP ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်
(ဥပမာ SG က SingNet ဆိုရင် Adrive ကို လုံးဝ Access လုပ်လို့မရပါဘူး။ )
လိုရမယ်ရ ကို akaris ဖိုင်ကို ကျနော် ifile နဲ့ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Last edited by sawjonnie; 10-08-2008 at 08:52 AM..
ပို့စ် 19 ခုအတွက် 76 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
total files converter များ မရှိ ဘူးလား ခင်ဗျာ.....
Find More Posts by naingkoko
Last edited by sawjonnie; 19-12-2008 at 04:29 PM..
ပဲပြုတ်, ဖယောင်း, မိုးပြာပြာ, နေမင်းသွေး, blackNwhite
ဒီsolfware ကလည် extensions တော်တော်များများကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ် ....
Password - WWW.Myanmarfamily.Org
Last edited by tu tu; 11-08-2008 at 02:44 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မောင်တေဇာဝင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုအောင်, ပဲပြုတ်, Blackbrother, centurymg
conventer ဆိုလို့ တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်...
သီချင်းဗွီဒီယို ခွေ တစ်ခွေလုံးကို ..တစ်ခါထဲ add ပြီး MP3 လုပ်ချင်ပါတယ်..
( ဆိုလိုတာက တစ်ပုဒ်ချင်းမလုပ်ချင်တာ )
အဲလို လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ တချို့ဆော့ဝဲတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပြန်တော့လဲ..
သီချင်းတွေက ပြန်ဖွင့်ကြည့်ရင် အပြီးထိ မသွားဘဲ ..တ၀က်မှာရပ်နေ တာတွေ့ရတယ်..
အဲဒါနဲ့ဘဲ...တစ်ပုဒ်ချင်းဖြတ်ရတဲ့ ..(ခေတ်မမီဘူးဘဲပြောပြော) VCD cutter ကို သုံးနေမိ တုန်းပါဘဲ..
ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းများ ..ကူညီပေးပါအုံး..
သီချင်းဗွီဒီယို ခွေ တစ်ခွေလုံးကို ..တစ်ခါထဲ သီချင်းများ အားလုံးကို add ပြီး MP3 လုပ်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံးဆော့ဝဲနဲ့..အသုံးပြုပုံလေးသိချင်ပါတယ်..
ကျွန်တော်တင်ထားတဲ Fox_Video_Converter_v7_1_.9.10.9 နှင့် Total Video converter နှစ်ခုတည့်ကကြိုက်တဲ့ဟာကို က်ုသုံးလိုက်ပါ ကိုဂျူနီယာ ......
တစ်ခါတည် add လုပ်ပြီးပြောင်းလိုရပါတယ်
Last edited by မောင်တေဇာဝင်း; 11-08-2008 at 11:38 AM..
ဖိုင်လေးက error ဆိုပြီးဒေါင်းလို့ မရဖြစ်နေလို့ပါ..
Last edited by tu tu; 11-08-2008 at 02:34 PM..
ကျွန်တော်ပြန်ဒေါင်ကြည့်တာတော့ရပါတယ် connection မကောင်းလိုနေမှာ ဂျူနီယာ......ပြန်ဒေါင်ကြည့်ပါအုန်ရပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မောင်တေဇာဝင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လင့်ခ်က အကောင်းပါ။ အဆင်မပြေရင် zshare လင့်ခ် ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
ပထမ မရဖြစ်နေတာက ..IDM ကြောင့်ဖြစ်နေတာပါ..link ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး...
serial ပါ .ပါတာတွေ့ရလို့
Last edited by maJunior; 11-08-2008 at 03:24 PM..
ပို့စ် 26 ခုအတွက် 68 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
FOX ကဒီဗွီဒီ ဘန်းလို့မရဖြစ်နေတယ်...register လုပ်ထားတဲ့ဗားရှင်းမဟုတ်လို့တဲ့...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပါအုံးအကို..
Find More Posts by hope4future
FoX ကို ဒေါင်းလို့ ရတဲ့ zip ဖိုင်ထဲမှာ serial ပါတယ်လေ....ရမှာပါ..သေချာလေးကြည့်ကြည့်ပါအုံး..
ကိုအောင်, Blackbrother, blackNwhite, centurymg, mercury
အစ်ကိုရေ password လေးပြောပါအုံး......
Last edited by tu tu; 19-08-2008 at 09:01 AM..
Originally Posted by kyawmin
www.myanmarfamily.org နဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါ ကိုကျော်မင်းရေ ။
ရသွားပြီဗျို့........ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...အဲလိုပဲ ကျွန်တော်က အကုန်စမ်းမကြည့်
ပဲနဲ မေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေတော့ အစ်ကိုတို့ အလုပ်ရှုပ်သွားရတယ်.....sorry ပါဗျာ...
28-08-2008, 03:38 PM
သူကတော့ .DAT (vcd) ဖိုင်ကို open လုပ်လို့ရတယ်....ဒါပေမယ့် filetype မှာ all file လို့ပြောပြီးလုပ်ရတာ...သူ့ကို channel Mixer ဆိုတဲ့ tools နဲ့ အသံကို left rigth ပေါင်းလိုက်ရင် လူသံကို ၂ဖက်စလုံးကကြားရတယ်....channel Mixer မှာ 100-80 နဲ့ 80-100 လောက်ပဲကောင်းတယ်....၁၀၀ တွေအကုန်မပေးလိုက်နဲ့......စမ်းကြည့်ပါလွယ်ပါတယ်.....channel Mixer က သူ့ရဲ့ tool bars တွေထဲမှာ ရှိပါတယ်...pointer လိုက်တင်ပြီးရှာကြည့်ပါ....ပြီးရင် wav format နဲ့ save လုပ်ပေးပါ...သူနဲ့ တခါထဲ mp3 ပြောင်းလို့ရပါတယ်...ဒါပေမဲ့သူက mp3 quality သိပ်မကောင်းလို့ပါ.....သူနဲ့က channel mix လုပ်လို့ရလို့ သုံးတာ...
Last edited by gogogyi; 28-08-2008 at 03:52 PM..
ှSound Forge 6.0 အသံတွေကို ဖြတ်တောက်တဲ့ကောင်
သူကတော့ အသံဖိုင်တွေကို ဖြတ်တောက်တာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်....စမ်းကြည့်ပါ...select လုပ်ပြီး delete လုပ်ရုံပါပဲ ကို မလိုချင်တဲ့ သီချင်းရဲ့အပိုင်းတွေကိုပါ...undo လဲ ရပါတယ်...ဒါပေမယ့် အသံဖိုင်ကို ပြင်ချင်ရင် wav format ကို ပြင်ပြီးမှ Mp3 ပြောင်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ....သူထဲမှာ ဖြတ်ပြီး process menu ထဲမှာ fade in fade out တွေလုပ်ပြီး...wav နဲ့ပဲ save လုပ်ပါ....သူလဲ mp3 ပြောင်းရင် အသံသိပ်မကောင်းလို့ပါ....Goldwave နဲ့ mix လုပ်ပြီးတဲ့ wav ဖိုင်ကိုသူနဲ့ ဖြတ်ပြီး WAV နဲ့ save လုပ် ....နောက် software တစ်ခုနဲ့မှ mp3 ပြောင်းမှာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ gogogyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
28-08-2008, 03:57 PM
ဒါတော့...နောက်ဆုံးအဆင့်ပါ...goldwave, soundforge တို့နဲ့ တည်းဖြတ်လာတဲ့ wav ဖိုင်ကို ဒီထဲမှာ mp3 ပြောင်းလိုက်ပါတယ်...bitrate ကို 128 kbs ထားပါတယ်...standard ပါ....ဒီကောင်နဲ့ပြောင်းတဲ့ အသံ မဆိုးပါဘူး....ဒါပေမဲ့...mp3 ကတော့ audio cd ကနေပြောင်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ....
web page ပေါ်မှာ သီချင်းတွေ ကို direct နားဆင်နိုင်ဖို့ သီချင်းများကို တင်တဲ့အခါမှာ mp3 format နဲ့ဆိုရင် နဲနဲစောင့်ရတာ ကြာပါတယ် လိုင်းမကောင်းရင်တော့ အဆိုးဆုံးပေါ့ လုံးဝ ကို မလာတော့ဘူး အခု တင်ပေးတဲ့ software လေးက .mp3 format ကနေ .swf ကို ပြောင်းပေးတာပါ အဲဒီ format နဲ့ဆို connection မကောင်းရင်တောင်မှ သီချင်းတွေက လာနေပါတယ်ဗျာ…..သူကထုတ်ပေးတဲ့ code တွေကို ယူပြီးတော့ သွားတင်ယုံပါဘဲ ဒါပေမယ့်ပြောင်းရမှာက သီချင်းရဲ့ လိပ်စာလေးပါ…….သီချင်းတွေကို တစ်နေရာရာမှာ Hosting လုပ်ထားဖို့တော့လိုပါမယ်…… google မှာသွားတင်လဲရပါတယ်….ပြီးရင် သူကထုတ်ပေးတဲ့ code ထဲမှာ သီချင်းလိပ်စာ(ကိုယ်တင်ထားတဲ့ လိပ်စာကို )ပြောင်းပေးရပါတယ်……..ဒါပေမယ့် အဲဒီ software ကို crack မလုပ်ရင်တော့ သီချင်းရဲ့ 50% ကို သာပြောင်းပေးပါတယ် Patch လုပ်ပြီးရင်တော့ သူက အပြည့်သုံးလို့ရပါပြီ…………..
လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ DOWNLOAD ယူစေသတည်း မရှင်းတာများရှိရင်လဲ post reply လုပ်ပေါ့ဗျာ………
Quality က သိပ်မကောင်းဘူး ... Export လုပ်ပြီးတဲ့အခါ
ဆော့ဖ်ဝဲ တော်တော်များများတော့ သုံးကြည့်တာပဲ ..
လိုက်ရှာရင်းနဲ့ ... ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ တင်စရာမလိုတော့ပါဘူး
website ရှိပါတယ် ... ကျွန်တော်သိတာလေးကို ဝေမျှတာပါ ..
ထုတ်ပေးတဲ့အခါ Quality တော်တော်ကောင်းပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ KTM အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 28 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အစ်ကို တို့ရေ...ကူညီကြပါဦးနော်...Total video convector က ဖွင့်လို့ရဘူးခင်ဗျာ...ပြန်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်...အစဉ်ကျေးဇူးတင်နေမှာပါနော်...
Find More Posts by thetbo
ဒီတစ်ခါလည်း ကိုယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာ တင်စရာမလို့ပါဘူး
Online Converter ပါ
Convert လုပ်လို့ရတဲ့ Files Types တွေကများလွန်းတော့
ရေးမပြနိုင်တော့ပါဘူး .... အစုံပါပဲဗျာ ... ကိုယ်တိုင်သာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ
24-09-2008, 11:39 PM
ကွန်ဗာတာများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.............တချို့လင့်ခ်တွေတော့ သေနေပါပြီ..............ဖိုငမရှိတော့ပါဘူး.....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကျန်စစ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်နိုင်, centurymg, psaungsku
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ PyaitSone အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
7. Supports 30 languages
Last edited by ကျော်ကိုထက်; 11-10-2008 at 04:00 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ ကျော်ကိုထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုအောင်, ဇင်ယော်, ပဲပြုတ်, မိုးပြာပြာ, ဦးသာကြီး, အောင်ဇင်, AZM, Blackbrother, Ko Kagyi, mg aung kyaw, Ohmegazan, thetzin, Venom